DAAWO-Puntland oo ka hadashay abaabul siyaasadeed oo ka socda Badhan digniina u dirtay DFS.
May 3, 2021 Xuseen 22
Puntlandtimes (GAROOWE)-Puntland ayaa ka hadashay madal loogu magac daray “Madasha badbaadinta Maakhir” oo habeenimada xalay lagaga dhawaaqay magaalada Badhan ee xarunta gobolka Sanaag.
Xildhibaan Kuluc oo katirsan xubnaha golaha wakiilada Puntland ee deegaan doorashadoodu tahay gobolka Sanaag ayaa sheegay in gobolku katirsan yahay Puntland isla markaana loo baahan in shaqsiyaadka wata danaha siyaasadeed aysan khalkhal ka abuurin.
Waxa uu sheegay in shaqsiyaad ay soo dirtay Dowladda Soomaaliya ay xilligaan qorshayaal siyaasadeed ka wadaan gobolka, wuxuuna uga digey DFS inaysan dhibaato ka geysan gobolkaasi ayna shacabka ka daayaan hawo uu sheegay inay beentahay.
Kuluc usagu miyaaanu soomaali ahayn Badhanse miyaanay ahayn dhul Somaaliyeed DFS miyaanay iyadu ka mas’uul ahayn dalka oo dhan oo Badhani ka mid tahay & dadka isagu ka mid yahay. XDH kuluc ma waxuu u qabaa dalka in Puntland wakiil ka tahay si ka badan maamul goboleednimo sida sanaag uga wakiil tahay gobol ahaan magaaladan. Somalia DFS ayaa u ah lehna goaanka u danbeeyey dadka yaan la waalin x/dh-kuna ha ogaado inuu ku hadlo maamul goboleed afkii, dowladdana kama hor istaagi karo sharciyan qorshayaasheeda dalka ay ka waddo si la mid ah sidaanu uga horjoogsan karin Puntland inay magaaladan ka shaqayso haddaan fowdo lagala hor imaanayn taasoo waliba ku talogal ah
Adigu DFS iyo Farmaajo ma kuu kala duwanyihiin marka hore? “Dawlad Federaal” sideedaba waa un dallad guud oo heer qaran la iskugu dugsanayo, waxaana kasokeeya oo qof kasta ugasii muhiimsan ismaamulkiisa hoose ee uu degaankiisa kaga arrinsanayo.
Farmaajo iyo DFS xaggee bay jireen markii Puntland la asaasayay oo ay Warsangeligu iyo Dhulbahantuhu sharka SNM kaga nabadgaleen oo sumcaddoodii iyo karaamadoodii kubedbaadeen? Haddii ay Farmaajo iyo “DFS” beelahan wax qaddarin ah uhayaan, maxay carrigooda cag usoo dhigi waayeen intii ay xukunka hayeen?
Maamul goboleed afkiisa wuxuu ugu hadlayaa inuu maamul goboleedkani DFS iyo Farmaajoba kahorreeyay oo DFSnimadana inta curiyay weliba soo canqariyay oo heerkaas kusimay. Inaad Xamar afka ukalahayso waxaa milyan jeer kuu sharaf dhaanta inaad dheriga dhardhaarta Garoowe saaran ee aan lagaa lahayn wax kacantoobsato.
OO MAXAY KU KALA DUWAN YIIHIIN” madasha badbaado qaran” “Madasha badbaadinta Maakhir” kkkkkk midna waxaal midna waa xaaran . Kkkkkk “lajiifiyaa banana la joojiyaa banaan”
Waad iska hasashay , dalku waa Federal, is maamuli leh oo loo dhaafi karin , dastuurka tuuga Farmaajo jebinayo weeye waxaad taageeraysa. Adeer haddaad keli tells nimo doonayso , orod Gedo u guur meeshan dad baa ka taliya ah, Farmaajo xaggee xukuma , Xamar ma xukumaa, 2 km oo Amison ku ilaliso buu joogaa, dhedo roob ha moodiness, Farmaajo waa bil 3
Waxaan maqlayaa oo kale inay khaatumona shir noocan ah qabanqaabinayso.
Madaxda Puntland waxay ibtilo kudhigeen in mar la suuldaaray ay afka furtaan. Siyaasaddu qaabkaas umashaqeyso oo iyada iyo daadkuba cidna umakaadiyaan. Madaxda Puntland waa mar ay diyaarad saaranyihiin, mar ay Xamar ukalatirinayaan, iyo mar ay Villa Garoowe kudhex aabburanyihiin.
Madaxda Puntland indhawaaleba way ogaayeen inuu Farmaajo waxyeelleynta Puntland usoo tafaxaytay oo ayna ka go’antahay inuu tolka kuwalaaleysan qummaati iskugujebiyo, haddana waxaa yaab iyo amankaag noqday in aysan iskuba hawllin inay duufaantaas kahordhacaan oo daldalollada jirana kasii cubaan.
Haddeer waxaa uu waajibku ahaa in madaxweynuhu iyo kuxigeenkiisu ay jaa Mudug, Bari, Sool, iyo Sanaag socdaallo qorsheysan kusoomareen amaba kumarayaan oo ay shacabkooda ujeedinayaan khudbado xasaasi ah ee dhagarta Puntland loomaleegayo bayaan ugu kala dhigdhigaya oo cawaaqib xumadeedana umuujinaya. Waxaa uu waajibku ahaa inay madaxdu haddeer shacabka hormuuqanayaan oo Puntlandnimadooda kudhiiragelinayaan, awrkacsiga bugta iyo khiyaanada ahna sida uu yahay ugu sawirayaan.
Ruuxa karajaqaba inuu siyaasi iyo hoggaan hayin ah noqdo waa inuu fahamsanyahay inay kuwaajibayso inay cagihiisu iyo afkiisu daalaan oo uu shacabkiisa qummaati uguxiranyahay – maan iyo qalbiba. Waxaa Siciid Deni loogafadhiyay inuu haddeer makiinadda xukuumaddiisa toos udhaqaajiyay oo ay geyiga oo idil roob sidiisa umaansheeyeen, maadaama hoygiisii loogusoo dhacay oo uusan fadhi u ool.
Villa Garoowe ayaan digniino af ah kasoo dirayaa waa istraatijiyad aad u qaldan oo madhalays ah: waa inay madaxdu fadhiga kakacaan oo shacabka Puntland himilo, hiigsi, iyo hiraal qancin kara ee midnimadana mayalka u adkeyn kara hordhigaan. Haddii kale waxay xaajo kunoqonaysaa “Nin Seexday Siciisaa Dibi Dhalay”.
Dadka hadal maanka deeqa ayaa kaga saameyn badan laaluush xaaraan ah.
WAXAA SHAQEYNAYSA SHAXDII QARNIGA EE DOLLAR QAATE DENI MUXUU KA QABANI KARAA XASARADAHA PUNTLAND WAA ISAGA FARMAAJO KA LAALAADEE ? , NIN DAAD QAADAY XUMBO CUSKAY, KKKKKKK
Awlal maashaa walaal nin wax garada ayaad tahay haday maqlayaan kuwa vila garoowekuraasta isku wareejinaya
Farmaajo iyo guulwadeyaasha ku xeeran waxaa haya aqoonxumo ku aaddan dhaqanka iyo beelaha Soomaaliyeed. Sanaag-bari ma aha Laascaanood amase Karin-dabayl-weyn (koonfurta Sool). Shakhsiyaad danaysteyaal ah meel walba waa joogaan laakiin in Warsengali laga gooyo Puntland waa baabaco timo kasoo baxeen. Haddiibase ay dhacdo in laga gooyo ma Somaliland raacaan baa la doonayaa illeen Sanaag-bari kama dhexjiri karo Puntland iyo Somaliland iyagoo Xamar raacsane?
MAXAMUUD SALABEEN XUKUN JECEL WAXEEYSAN KU SIXAABTAMIN HADII 4.5 LAGA BAXO REER SOOL AMA SANAAG BARI XILDHIBANDOODA AMA WAXEEY SI TOOS AH UGU DARISAN SOOMALILAND AMA DFS AYAA SOO XUKEYSA INTA ARINTA SOOMALILAND DHINAC LOO RIDAYO. MAXAMUUD SALABEEN XUKUN JECEL WAXEEY RABAAN INEY KU BADSADAN BARLAMAANKA FEDERAL XILDHIBANADA SOOL IYO SSNAAG BARI MEESHII LA RABEY INEY DHISAN DEGMOOYIN BADAN WAQOOYIGA MUDUG, NUGAAL IYO BARI…..MAXAMUUD SALEEBAN XUKUN JECEL WAX WALBA WAXEEY U SAMEYN INEY XUKUN HELAAN LAAKIN TAASI SOCON MEYSO DHAMAATEY XAMARNA LAGAMA YAABO INEY TALO WEYN KU YEESHAN.. .
Ali way kula tahay dhulka Puntland waa dhul Puntland qof kii caashaqsan ee jacayl u haya ina fargaajaha inan layaal ka xamar ku jooga ha aado, dhulku ma socdee dadkaa socda ee ogsoonow bowe oo ashaa yaadan kaalshiraha kasoo dhex niiclayne.
Badhan waa magaalo Puntland waligeedna way ahaan doontaa laba wiil oo qol iskusoo xiray oo ini fargaajo oo villa wardhiigley ku jooga siilka Saynab macalin inan layaal ahi soo diray diray waa uun iska riwaayad raqiis ah talaabo cad ayaa laga qaadin xabsiga ayayna liinta ku cabin. Ini fargaajo waa bakhtiyay isagoo uraya oo foolxun canaasiirta haraadiga ahina way hoogi doonaan
Wa ceeb ,Goorma ayey Badhan noqotay dhul ku tiirsan Puntland? Badhan waa dhul ay leeyihiin Warsengali, oo ka tirsan Somaliland , tani waa sheeko hore, sheeko cusub ma haysaa.
Canaasiirta ini fargaajaha bakhtiyay ee xamar ku jooga siilka Saynab macalin ee inan layaal ka ah shilimaadka kasoo qaatay xabsiga ayay liinta ku cabidoonaab waana ka shalayndoonaan. Ogaada wakhtigii cagiska Madaxwayne waa la dhaafay maybe next Ciid inaad sugtaan.
Ninka maadasha badbaado qaran sheeganayaa, maalin gelinkeed ma joogi karo hadaan Puntland ilaalinayn.
Adigoo nin kaa fog oon waxba kuu hayn u qayshanaya ha isku dirin ninka kula jooga.
Waa iska hadlayaal.
Taariikhda dunida oo dhan waxa u dhexeeya sooyaal wax lago waadan karo.
Bal eeg wixii dhacay dagaalkii labaad ee dunida.
Waliw dalaksasi ay qowmiyado kala duwan ahaayeenobla iso keenay,aakhirkiiba kala tagay,o xitaa midiwgii soofiyeetiga saamaysay,maaxaa laga baran karaa,oo Soomaalida oo hal qowmiyad ah,balse cudurka qabyaalado kala qaybinaayo,suurgal na aysan ahaayn iminka in sida wax u dhisanyihiin in lago sii socdo,waxaa la wada ogyahay in Somaliland iyo Puntland si deg deg lago dhisay,shaki kuma jiro in shacabka haljaasi degen aysan rasli ka ahayn waxa kaga yagleelay.
Waxayna u kala bixi doonaan,waqooyi galbeed,togdheer,Sanaag bari ,🍋oo Maakhir,Sool,Boohoodle.Awdal
Gobolada iminka aha Puntland waxa ay noqon,Bari,Nugaal iyo qayb ah waqooyiga Mudug.
Jubaland,waxay u kaka bixi sidii hore,Gedo,Jubada dhex iyo Jubada hoose oo kala maamul ah.
Hiiraan gooni bay noqon,Gal-Mudug waxa laga saai Cabuud waaq,xaraale.oo maamulo gooni ah noqon. Maamulka Koonfur galbeex isana waxa loo qaybin labo.
Si ku dhow nidaamka dalka Switzerland oo ah mid Somalia u horseedi karta nabad iyo in dhibaatada soo jirtay burburkii ka dib si sax ah loofa baxo,madawaynaha jamhooriyaduna ay mid meerta ah noqoto.
Farmaajo wuxuu rabaa inuu Hartina iyo maamulkooda ay ku nabad galeen iska horkeeno, Mareexaana mideeyo.
Mideeda kale waa 2 wiil oo qol isku soo xiray, Faarax Geylaana buun buuni la yiri.
Puntland horay casharo kuwaa ka daran uga soo badbaaday, DAD ISKU ISIR AH LAMA KALA DHEX GELI KARO.
Waar soomaalidu in belo dhacdo jecelaa, malaha aakhiraa dad badan oo Soomaaliyeed u baahatay. Waa maxay danta ugu jirtaa in burbur kale dhaco ayadoo burburkii horeba laga soo kabsan la’yahay.
Saa danbaydin garan.
PUNTLANDER MAGACA HA NOOGA XAARIN.
DENI HADDII UU DOLLAR KA QAATO FARMAAJO QADARI DALKA QADAR MAXAY SIIYAAN BAL INOO SHEEG ADIGA???
DOLLAR, RIYAAL, SHILING SOOMAALI,
BIRTA XABASHIDA TELL US.
CBB CAYAYAANKA BARAHA BULSHADA
SIDA LOOGA NADIIFIN DOONO ARIMAHA SOOMAALIYA WAA IN LAGA FEKERA MARKA FARMAAJO QADARI QORO AMA LAGA SAXIIXO INUUSAN AHAYN MADAX WEYNE.
Waabari waranle says:
Waxaanan garan in mar lasheegto Somaliland= isaaq marna warsangali Harti, waxay ila tahay in nin waliba garto cidduu yahay inta somalidu ka gudbayso QABIILKA. Saasuuna ku sharfan yahay. Haddii kale walle waxaad noq sidii in cumar jeeskii agfadhiyi jiray mooryaantii caydiid.HAYBAD WAXAAD KU LEEDAHAY EHELKAAGA DHEXDIISA.
Adigu Amisomland ayaad tahay, ciidanka Burindi & ugaadha ayaa shaqadaada yaqaan. . caqli baantuuu ayaa tahay.. baantuu baantuu dhalay ayaad tahay, qofna uma dhuuman kartid.
Thank you Awlal.
Aad ugu riyaaqay talada fogaan-garadka ah ee Awlal. Waana filayaa in dhamaan inta caqliga u saaxiibka ahee, dadka iyo dalkana samaha la jeceli u riyaaqday. Hogaanka puntland na waxan is leeyahay arinkaas way ku baraarugsan yihiin!
Jileec ayaan ka dareemayaa vila garooowe farmaajo 4sano ayuu dagaal u galay inuu burburiyo nidaamkii federaalka ee lagu soo doortay umana suurta galin.laakiin mid buusan ka quusan waana in reer puntland qoys qoys isugu diro oo dab galiyo Iyana uma suurtoobi doonto, kuwa qolka badhan ka dhex qaylinayana waxaan leeyahay adeerayaal sac baqtiyey ayaad caana ka maalaysaane farmaajo yaanu idin aakhiro seejin